May 25, 2019 - PuraKhabar
के भन्छन गुठिबारे माधव नेपाल
छोरी जन्मिए खातामै एक हजार !
ज्वानो खानुका यस्ता छन् ७ फाइदाहरु , सुगर, मुटु, दाँत दुख्ने लगायतका समस्याबाट बचाउँछ
गुठी विधेयक परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
प्रचण्ड उपस्थित धुम्बाराहीको कार्यक्रममा पूर्व एमाले अनुपस्थित !
भारतीय कांग्रेसको हारबाट पाठ सिकौंः रामचन्द्र पौडेल
May 25, 2019 Purakhabar News
११ जेठ, दार्चुला । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भारतमा कांग्रेसले व्यहोरेको हारबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले कमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने र जनता चाहेको जस्तो कांग्रेस बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तरगत दार्चुला आइपुगेका नेता पौडेलले कम्युनिस्टको सामना गर्न कांग्रेस पनि बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । हालै मात्र भारतको लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीसँग कांग्रेसले सुनाउँदै नेता पौडेलले त्यसबाट कांग्रेसले पनि शिक्षा लिनुपर्ने बताए । बरिष्ठ नेता पौडेलले स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि गल्ती नगर्न आग्रह गरे । कम्युनिस्ट सरकार…
May 25, 2019 May 25, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) विजयी भएको छ कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा शनिवार भएको खेलमा एपिएफले पारस खड्का नेतृत्व रहेको प्रदेश नं ३ लाई ४१ रनले पराजित गरेको हो । जितका लागि एपिएफले दिएको २८९ रनको विशाल लक्ष्यमा प्रदेश नं ३ २४७ रनमा समेटियो । प्रदेश नं ३ निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २४७ रनमा समेटिएपछि पराजित हुन पुग्यो । प्रदेश नं ३ का लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक ११७ रनको योगदान दिए । त्यस्तै कप्तान पारस खड्काले ४६, रीत गौतमले २७…
शनिवार पात्रो अनुसार हप्ताको सातौं दिन पर्छ । यसको नामाकरण शनिग्रहको रूप मानिने शनि देवताको नामबाट गरिएको हो । हिन्दु धर्मको किवदंती अनुसार शनिबारकी माता कालीमाता हुन् । अझ शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिबारको दिन भोजन गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । के छ त शनिवारको विशेषता ? – शनिवार दूध अथवा दही सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने खाली दुध अथवा दहीमात्र सेवन नगर्नुहोस् । त्यसमा थोरै गुड अथवा चिनि मिसाएर खानुहोला । धर्मशास्त्र अनुसार, शनि देवलेसादा दूध र…
यमलाल भुसाल / ११ जेठ, बुटवल । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीले व्यवसायी आचार संहिता विपरित गति विधी गरेको भन्दै एक व्यवसायीलाई संस्थाको साधारण सदस्यतावाट निष्कासन गरेको छ । संघको शनिवार बसेको बैठकले संघद्धारा जारी व्यवसायीक आचार संहितालाई पालना नगरी व्यवसायलाई र संस्थालाई नै आघात पुराउने गरि पेशा व्यवसाय गरेको भन्दै बुटवल ११ कालिकानगर स्थित राप्तीमिनु रेष्टुरेन्टलाई संघको साधारण सदस्यता पनि नरहने गरि निष्कासन गरेको संघका अध्यक्ष समुन्द्र जिसी र महासचिव माधव कुमार खनालद्धारा सम्युक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । राप्तीमिनु रेष्टुरेन्टका सञ्चालक बागलुङ् निसिखोलाका वर्ष २९…
रौतहट । राज्यले नदी जन्य पदार्थ निकासी गर भनेर ठेक्का दिँदा पनि रौतहटका एक ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थको निकासीमा समस्या भएको छ । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले चाँदी नदीमा लगाएको ठेक्का स्थानीयले रोकेपछि ति ठेकेदारले चाँदी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीमा समस्या भएको हो । गौरब हार्वबियर चन्द्रपुर-५ ले चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट १ करोड २७ लाख ५० हजारमा चाँदी नदीको नदिजन्य पदार्थ निकासीको लागी लिएको ठेक्कामा स्थानीयबासीले अबरोध गरेका हुन् । गत माघ देखी गौरव हार्ववेयरले चाँदी नदीबाट ६० हजार घनमिटर बालुवा गिटी निकाशी गर्ने ठेक्का दिएको भएतापनि हाल सम्म १५ हजार घनमिटर मात्रै…
११ जेठ, काभ्रे । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर व्यक्तिगत आक्रमण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।गृहजिल्ला काभ्रेमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले व्यक्तिगत आक्रमण देखेर अचम्म लागेको बताए । ‘आक्रमणको पनि तरिका हुन्छ, व्यक्तिमाथि हमला गरेर जसरी हृयारेसमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मलाई अचम्म लाग्या छ । बौद्धिक, सम्मानित नागरिकहरु, जसको म नाम लिन चाहन्न’ अधिवक्ता शम्भु थापालाई इंगित गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘जसले मेरो हुलियाको बारेमा खोजिरहनु भा’छ, हुलिया हाजिर छ हजुर ।’ उनले अघि भने, ‘सार्वहारावर्ग, श्रमिकहरुको रक्षा र हितका निम्ति कानुनहरु बनाउने, सरकार चलाउने र न्याय…
विप्लवका जिल्ला प्रमुख सत्‍तारुढ नेकपामा
स्याङ्जा : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्याङ्जा जिल्ला प्रमुखले पार्टी परित्याग गरेका छन्। नेकपाका जनप्रतिनिधि सभा अध्यक्ष समेत रहेका शोभाकान्त पौडेल (राजु) ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेको जनाएका छन्। जिल्ला सचिव गोकुल पराजुलीलाई पहरीले पक्राउ गरेसँगै जिल्ला प्रमुख भएका वालिङ नगरपालिका ६ का पौडेलले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विप्लवको नीतिले जनताको हित नगर्ने बताएका छन्। माओवादी जनयुद्धमा जनमुक्ति सेना हुँदै जिल्ला सदस्य बनेका पौडेल २०७१ सालमा विप्लव समूहमा प्रवेश गरेका थिए। पार्टी परित्याग गरेका पौडेललाई नेकपा गण्डकी प्रदेश सदस्य तथा…
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनमा आधारित फिल्म ‘पीएम नरेन्द्र’ शुक्रबार मे २४ तारिकबाट भारतमा प्रर्दशनमा आएको छ । फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो आशा जगाएको छ । फिल्म लोकसभा चुनाव २०१९ को नतिजाको एक दिनपछि रिलिज भएको हो । ‘पीएम नरेन्द्र’ मोदी फिल्मले २.८८ करोड कमाएको भारतीय मिडियामा उल्लेख छ । ओपनिङको आकाडा कम भएपनि फिल्मले राम्रो कमाइ गर्ने आशा देखाएको छ । यो फिल्मलाई ओमंग कुमारले निर्देशन गरेका हुन् । अभिनेता ओबेराँयले पीयम नरेन्द्र मोदीको अहम भुमिका निभाएको बताइएको छ । भारतीय रिर्पोटका आधारमा फिल्मलाई मोदी लहरको फाइदा मिलेको…
युवाले खोलाको फोहोर नगरपालिकाको ढोकामा फालेपछि..
जुम्ला : चन्दननाथ नगरपालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अझै ठाउँ टुंगो लागेको छैन। फोहोरका कारण नगरमा दुर्गन्ध बढ्दै जाँदा स्थानीय आक्रोशित छन्। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको नगरपालिकामा फोहोर मात्रै होइन खुला शौचालयको पीडा पनि छ। बजार क्षेत्रमा निर्माण भएका सार्वजनिक शौचालय भने प्रयोग बिहिन छन्। केही दिनयता सदरमुकामको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने केही युवा संगठित भएका छन्। ‘जागौं युवा कर्णाली नेपाल’मा आबद्ध युवा संजालले सफाइ अभियान सुरु गरेको हो। अभियान अन्र्तगत शनिबार दिउँसो युवाहरुले जुगाड खोलाको फोहोर नगरपालिकाको ढोकामा ल्याएर फालेका छन्। युवाहरुले नगरपालिकाको ढोकामा फोहोर फालेपछि यो विषयले…
बुटवल, ११ जेठ प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश नं. ५ लाई सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको बताएका छन् । शनिबार मानव सेवा आश्रम बुटवल शाखाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बरालले एक छाक खान नपाएर सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणमा सरकार लागेको उनले बताए । उनले मानव सेवा आश्रमको सहकार्यले आश्रमले परिकल्पना गरेको सडक मानवमुक्त देश अभियानमा समेत साथ दिने बताए । प्रदेश सरकारले सडक मानवमुक्तका लागि आवश्यक कार्यक्रम निती तथा कार्यक्रममा समेत समेटेको भन्दै यो अभियानमा प्रदेश सरकार…
June 17, 2019 Purakhabar News 0
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म भारतले अहिले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरिरहेको छ  ।...
June 16, 2019 Purakhabar News 0
फिल्म प्रेम गीत ३ निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । फिल्मका लागि नायिका छान्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ...
June 12, 2019 Purakhabar News 0
अभिनेत्री ईशा देवोल दोस्रो पटक बनिन् आमा, छोरीको नाम के राखे ?
काठमाडौँ । चर्चित अभिनेत्री ईशा देवोल दोस्रो पटक आमा र भारत तख्तानील बाबा बनेका छन् ।...
काठमाडौं– भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले सबैभन्दा छोटोसमयमा ११ हजार रन पूरा गर्दै किर्तिमानी बनाएका...
जित नजिक पुगेर पनि अष्ट्रेलियासँग हार्‍यो पाकिस्तान
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध जित नजिक पुगिसकेको खेल पनि पाकिस्तानले ४१ रनले गुमाएको छ ।...
June 11, 2019 Purakhabar News 0
भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट लिए सन्यास
भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन । सन् २०११ मा भारतले विश्वकपको उपाधि...
प्रदेश न. ५ याेजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले किन दिए राजीनामा ?
२ जेठ,बुटवल । प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।...
प्रदेश नं. ५ सरकारले ल्यायो ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट
१ असार, बुटवल । प्रदेश नं. ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको...
June 16, 2019 Izzat Baral 0
सातै प्रदेशको बजेट आउँदै, कुन प्रदेशको कति?
सातै प्रदेश सरकारले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकारले असार...